Mbola mitana ny sain’ny maro ny raharaha Augustin Andriamananoro izay nampidirina am-ponja vonjimaika ary hiakatra fitsarana rahapitso. Raha ny lojika politika dia ny fitondrana no tokony handamina sy handranto fihavanana amin’ireo ambara ho mpanohitra, saingy tsy izay no misy. Tsy azo lavina fa misy tokoa ny mpanohitra eto amin’ny firenena saingy ny iaraha-mahita aloha dia tsy manana herijika hahavita hanongana na hampiozongozona ny fitondrana amin’ny toerany akory aza izany. Toa nangina aza izy ireo satria izay natao rehetra tsy dia nahomby avokoa. Nandeha ny resaka fitarihana vahoaka hidina an-dalambe saingy nitsefotra. Nisy ny fivoriana tamina toerana voafefy kanefa tsy sarotra tamin’ny fitondrana ny nandrava izany. Nanomboka teo dia tsy dia hita intsony izay tena paikadin’ny mpanohitra afa tsy ny fanehoan-kevitra amin’ny alalan’ny haino aman-jery. Tetsy an-kilany, hita ho ny mpitondra indray no manao fihetsika mahery vaika ao anatin’ny fotoana tokony hisian’ny fitoniana. Mahagaga ny finiavana avy any amin’ny filoham-pirenena izay tompon’ny teny farany ny haneho hery sy hihantsy indray ny mpanohitra. Toa efa kajikajin’ny samy mpitondra no misy, ka kendrena izay hampijabaka ny filoham-pirenena hanaotao foana sy hanangam-pahavalo andro aman’alina mba hahafahana misongona azy aoriana. Efa maro amin’ireo manodidina azy rahateo no voalaza fa te hisongona ny filoha amin’ny lafiny rehetra toy ny fifidianana ho avy, ka manomana hevi-petsy hamotehana azy tsikelikely.